आफ्नै श्रीमान बलात्कारी बनेपछि.....
हेटौडा, जेष्ठ २४ । पाँच साताअघि दाम्पत्य जीवनमा बाँधिएकी एक महिला पतिकै संलग्नतामा सामूहिक रूपले बलात्कृत भएकी छन् । प्रहरीले सामूहिक बलात्कारको अभियोगमा पति सन्तोष र देवर सुमन उपाध्याय, मतियारको रूपमा तिनका काकी भगवतीदेवीलाई पक्राउ गरेको छ । हेटौंडा ८ निवासी सन्तोषको स्थानीय २१ बर्षकी युवतीसँग गएको वैशाख १ गते परम्परागत रूपले विवाह भएको हो । विवाहको भोलिपल्टैदेखि दाजुभाइ मिलेर लठ्याउने औषधि खुवाउँदै पालैपालो बलात्कार गर्दै आएको पीडितको उजुरीमा उल्लेख छ । बलात्कारको पछिल्लो घटनामा आफूमाथि निर्घात कुटपिट भएको पनि उल्लेख छ । उनको हाल हेटौंडा अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
नीजि क्षेत्रलाई समेट्न नसकेपछि प्रधानमन्त्रीको आलोचना
को–को छन् कोइरालाको जम्बो टोलीमा ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला तीस जनाको जम्बो टोलीसहित चीन भ्रमणमा गएका छन् । अन्य ८ जना भने चीनस्थित नेपाली दुतावासबाट सहभागी हुनेछन् । चीनको कुन्मिङ प्रान्तमा हुने दोस्रो ‘चाइना साउथ एसिया एक्स्पो’मा सहभागी हुन प्रधामन्त्री कोइराला चीन प्रस्थान गरेका हुन् । तर प्रधानमन्त्री कोइरालासँगै टोलीमा को को भाग्यमानी परेछन् भन्ने कुरा सायद पाठकलाई पक्कै पनि जान्न मन होला । उनको भ्रमण टोलीमा ३० जना अटाएका छन् । टोलीमा प्रधानमन्त्रीसहित उनका स्वकीय सचिव बसन्त गौतम, सल्लाहकारहरू दिनश भट्टराई र चिरन्जीवी नेपाल, नेपाली सेनाका लेफ्टिनेन्ट कर्णेल प्रकाश देउजा र प्रहरी निरीक्षक महेन्द्र मरासिनी छन् ।
योग्य र राम्रालाई नि आँखानै देखेनन् आईजीपी अर्यालले
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्याल स्वयम्ले आफ्नोलाई काख र अर्कालाई पाख गर्ने गरेको प्रमाण भेटिएको छ । आईजीपी अर्यालले शान्ति मिसनबाट फर्किएका प्रहरीलाई उपत्यका बाहिर पोष्टिङ गर्ने नीति विपरित सरुवा र बढुवा गर्न थालेपछि यो कुरा पुष्टि भएको हो । आईजीपी अर्यालले युएन मिसनबाट फर्किएका डीएसपी हृदय थापालाई निकै आकर्षक मानिने प्रबन्ध शाखामा सरुवा गरेपछि आईजीपी अर्यालको निष्पक्षतामाथि प्रश्न चिन्ह उठेको हो । त्यसैगरी, डीएसपी थापासँगै मिसनबाट फर्किएका दीपक थापालाई मकवानपुर, हिमालयन श्रेष्ठलाई झापा, तथा दिनेश मैनालीलाई कपिलवस्तु सरुवा गरिएको छ । तर आईजीपी अर्याल निकट मानिएका अन्य एक दर्जनलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय तथा राजधानीभित्र नै पोष्टिङ गरिएको छ ।
एसएसपी खरेलको कनेक्सन कहाँसम्म ?
काठमाडौं । प्रहरीको बढुवामा विवादास्पद अभिब्यक्ति दिएका कारण चर्चामा रहेका एसएसपी रमेश खरेल ‘रअ’ का एजेन्टले आयोजना गरेको रात्रीभोजमा भेटिएका छन् । डीआईजी बढुवामा व्रिफकेश बोकेर चलखेल गरिएको बताउने एसएसपी खरेलसँग नेपालका नामुद डलर र सुन तस्कर दिपक मल्होत्रासमेत सँगै देखिए । त्यसो त सुन तस्करसँग मिलेर अकुत सम्पत्ति कमाएको आरोप खेपिरहेका डीआईजी विज्ञानराज शर्माको पनि उक्त रात्रीभोजमा उपस्थिति थियो । डीआईजी शर्मा नै एसएसपी खरेलको विवादास्पद अभिब्यक्ति छानविन टोलीका संयोजक हुन् । डीआईजी शर्मा र एसएसपी खरेल एकै ठाँउमा एउटै रात्रीभोजमा भेटिनुलाई समेत संयोग मान्न सकिन्न ।
यसरी सफाई दिइयो मिटरराजा सिंहलाई
एसएसपी रमेश खरेलले मिटरब्याजमा लगानी गर्ने नाममा अपहरण, असुली र जर्वजस्ती लुटपाट गर्ने अभियोगमा पक्राउ गरि मुद्दा चलाइएका महेशबहादुर सिंहलाई रातारात सफाई दिइएको छ । सर्वसाधारणको मुद्दा फैसला गर्न दुई बर्ष लाग्ने अदालतमा सिंहका चार अपहरण र जर्बजस्ती चोरी मुद्दा दुई महिनामै फैसला गरि सफाई दिएपछि न्यायालयको निश्पक्षतामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । सिंहविरुद्ध हातहतियार र बन्यजन्तु मुद्दा पनि छन् ।
यस्ता छन् एसएसपी खरेलको नजरमा ७ डीआईजी
काठमाडौं । चरम आर्थिक चलखेल र बरिष्ठता मिचेर डीआईजीबाट एआईजीका लागि बढुवा सिफारिस भएका ७ जना डीआईजी मध्ये ६ जनाको माष्टर डिग्री नभएको रहस्य खुलेको छ । स्रोतका अनुसार ३ करोड दिने सर्तमा बढुवा सिफारिस भएका डीआईजी प्रतापसिंह थापाले मात्र माष्टर डिग्री गरेका छन् । विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा हुनका लागि निजामती सेवामा अनिवार्य रुपमा डिग्री गरेको हुनु पर्छ । तर नेपाल प्रहरी जस्तो संवेदनशिल संगठनमा भने माष्टर डिग्रीको कुनै महत्व नदिएकोप्रति विभागभित्र नै असन्तोष बढेको छ । प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना हुँदा गरेको ब्याच्लर डिग्रीकै भरमा विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा हुने गरेको छ । स्रोतका अनुसार जागिर खाँदाको योग्यताकै भरमा आईजीपी हुनेमा बर्तमान आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्याल पनि पर्छन् ।
राजधानीमा फस्टाउँदो मृगौलाको अबैध ब्यापार
रोशन पाण्डे । काठमाडौं । मृगौलाका बिरामी बढेसँगै यसको अवैध कारोबार पनि मौलाउन थालेको छ । प्रहरीले मृगौला कारोबारमा संलग्न १० जना गिरोहलाई राजधानीबाट गत साता पक्राउ गरेपछि मृगौला कारोबारी सल्वलाएको पुष्टि भएको हो । मृगौला तस्करीले बिभिन्न आर्थिक प्रलोभनमा पारि अशिक्षितलाई भारतसम्म पुर्‍याएर मृगौलाको पत्यारोपण गर्ने गरेको समाचार विगतमा बाहिर आएपनि राजधानीकै अस्पतालमा किर्ते कागजात तयार पारि पत्यारोपण गर्न लागेको भेटिएको हो । एकाघरको परिवामा मृर्गौला पत्यारोपण गर्न कानुनीले छुट दिएको छ । तर, कारोबारीले गरिव र अशिक्षितलाई किर्ते कागजात तयार पारि कागजी रुपमा मात्र एकाघरको मृगौला पत्यारोपण गराउदै आएको स्रोत बताउँछन् ।
हराएका पासपोर्ट यसरी बेचिन्छन् बजारमा
रोशन पाण्डे / काठमाडौं । दैनिक विभिन्न पत्रपत्रिकामा दर्जनौं पासपोर्ट हराएको सूचना प्रकाशित हुन्छन् । हराएको पासपोर्ट कहाँ जान्छ, किन भेटिदैन ? कसरी राहादानी दैनिक एउटै प्रकृतिबाट दर्जनौं ब्यक्तिको हराउँछ ? प्रश्नैप्रश्न उठ्छ । दैनिक पत्रपत्रिकामा प्रकाशित बिज्ञापन अध्ययन गर्ने हो भने सबैको पासपोर्ट हराउने तरिका एउटै हुन्छ । एक ठाँउबाट अर्को ठाँउमा जाँदा वा गाडिमा जाँदा राहदानी हरायो भन्ने । के यो पासपोर्ट हराएको बिश्वास लाग्ने आधार हो त ? अनुसन्धानको बिषय बनेको छ ।
यस कारण हटाइयो एसएसपी रमेश खरेललाई
करोडमा एआईजीको फुँली
काठमाडौं । राजनीतिक दबाव र रकम चलखेलका कारण रोकीएको डीआईजी बढुवा अन्तत: हुने भएको छ । डीआईजीद्धय प्रतापसिंह थापा र बिरेन्द्रबाबु श्रेष्ठले ३ करोडको व्रिफकेस गृहमन्त्रीलाई बुझाएकै कारण बढुवा सूचीमा परेको स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री बामदेव गौतमले दुई जना डीआईजी आफ्नो भागवण्डामा पाए । सोही कोटामा मोलमोलाई मिलेपछि डीआईजीद्धयको बढुवा हुने भएको हो । सायद, महानगरीय प्रहरी परिसरमा कार्यारत एसएसपी रमेश खरेलले केही दिन पहिले यसै विषयलाई सञ्चारमाध्यामबाट उठाउने प्रयास गरेका थिए ।
‘राजालाई नागार्जुनबाट नारायणहिटी ल्याउन सकिन्छ’
काठमाडौं, जेष्ठ ११ । राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले विधि पुर्‍याएर राजतन्त्र फर्काउने उद्घोष गरेका छन् । प्रथम रा्िरष्टय महाधिवेशन उद्घाटनमा थापाले भने,‘राजालाई नागार्जुनबाट नारायणहिटी दरबारमा विधि पुर्‍याएर जतिबेला पनि ल्याउन सक्छौं ।’ थापाले राजतन्त्र फर्काउन अब जनताले नै म्यान्डेट दिने बताए । मुलुकमा ८० प्रतिशत सनातन हिन्दू धर्मालम्बी भएको र हिन्दुधर्मलाई मास्ने काम भइरहेको थापाको दावी थियो । अब त्यो रोक्ने आफ्नो पार्टी सक्रिय हुने बताउँदै थापाले भने,‘ धर्मनिरपेक्षता कुनै हालतमा स्वीकार्य हुन्न् ।’ राप्रपा नेपालको महाधिवेशनमा शुभकामना दिन प्राय: सबै दलका नेता सहभागी थिए ।